काइली जेनरले अन्ततः सामाजिक मिडियामा जोर्डिन वुड्सको अनुसरण गर्न सकेन - सेलेब्स
मुख्य शैली सेलेब्स ब्लग समाचार
महिनौं तनाव पछि, काइली जेनर उनको पूर्व सर्वश्रेष्ठ मित्र, जोर्डिन वुड्स, इन्स्टाग्राममा अनुसरण गरीरहेको छैन।
E! समाचार परिवर्तन याद भयो, जो जोर्डिनले ट्रिस्टन थम्पसनसँग स्वीकारेको हुकअपको बगैंचामा आएको थियो जब ऊ काइलीकी बहिनी र उसको बच्चाकी आमासँग सम्बन्धमा नै रहेको थियो, Khloe Kardashian । वेबसाइटले यो नोट गर्‍यो कि शनिवार, जुलाई २ 27 सम्म, जोर्डिन अझै पनि काइलीलाई पछ्याउँदैछ।
एमा म्याकइन्टायर / गेट्टी छविहरू SECNDNTURE का लागि
पछिल्लो सीजन 'क्यापिंग विथ कार्दावासीहरू' को क्यामेराको अगाडि क्यारेडाइन भयो र जोर्डिनले जाडा पिन्केट स्मिथलाई उनको 'रेड टेबल टक' शृंखलामा भनेको कुरा भन्दा बाहेक, काइली र जोर्डिनले प्राय: जसो परिस्थितिलाई सार्वजनिक रूपमा सम्बोधन नगरेको हो। Khloe को ट्रिस्टनको अन्त्य हुने चीज भयो, जोर्डिन काइलीको सम्पत्तिबाट बाहिर सर्दै र Kardashian-Jenner krewe सबै सम्बन्ध काट्ने , व्यवसाय र अन्यथा, जोर्डिनसँग।
'मैले उनलाई बोलाएँ र उनले वास्तवमै केहि भनेनन्,' काइलीले 'केयूडब्ल्यूटीके' मा भने जब परिवारले सचेत गराए कि जोर्डिन र ट्रिस्टन फेब्रुअरीमा एउटा घरको भोजमा बाहिर आए। 'उनि त्यस्तै थिईन्, तपाईलाई थाहा छ पूरा समय रुँदै थियो। र मैले उनलाई भनेको थिएँ, 'म अब तिमीसँग डराएको छु। मन पराउनुहोस्, भोलि बिहान तपाईं आफ्नो अनुहारमा मुस्कानको साथ जगाउन सक्षम हुनुहुन्छ। ''
काइलीले भनिन्, 'मैले उनलाई धेरै कुरा गरें जुन हामीले कुरा गर्यौं। जस्तै, तपाईं सत्यको बारेमा सोच्नुहुन्न थियो, Khloe होइन, मलाई होइन। तर तपाईं आफ्नै बारेमा सोच्दै हुनुहुन्नथ्यो, हेर्नुहोस् तपाईंले के गर्नुभयो। ''
'रेड टेबल टकमा,' जोर्डिनले भने उनी मातेको थिए जब उनी र ट्रिस्टन चुम्बन गरी। उनी पनि उनीहरू सँगै सुतेको अफवाह अस्वीकार गरे। उनले जाडालाई भनिन् कि उनी पनि खोलोसँग माफी चाहन्छिन्।
khloe kardashian ले कति वजन कम गर्‍यो
चेल्सी लरेन / REX / शटरस्टक
घटना पछि देखि, जोर्डिनमा सार्वजनिक चासो अप्टिकमा रहेको देखिन्छ भर्खरको gigs एक रिक रॉस संगीत भिडियोमा, वक्ताले युरोपमा हुने सम्मेलनको प्यानलमा बदमासीको बारेमा छलफल गर्दै अरूहरू पनि।
आगामी KUWTK 'सिजनको पूर्वावलोकन क्लिपमा Khloe सँग कुरा गर्दा, Kylie यस्तो लाग्यो कि उनी घोटालाबाट अगाडि बढेको छ।
'मलाई लाग्छ कि यो सम्पूर्ण जोर्डिन अवस्था कुनै कारणले हुनु आवश्यक छ। मेरो लागि, तपाईंको लागि, सबैका लागि, 'उनले क्लिपमा भनिन्। '[जोर्डिन] मेरो सुरक्षा कम्बल थियो। उनी मसँग बस्छिन्। हामीले सँगै सबै थियौं। '
Khloe, जो अझै पनि त्रिस्टेनले छोरीको जन्म हुनुभन्दा केही समय अघि उनीसँग धोखा दिएकी थिई, जब उहाँ जोर्डिनसँग विचलित भइसक्नुभयो भने पनि उनले ठूलो चित्रको बारेमा सोच्ने स .्केत गर्यो। उनको लागि, त्यो तस्वीर उनको छोरी हो, सही।
'त्यस्तो स्वर्गदूत सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने कसैलाई किन म कहिल्यै घृणा गर्दिन?' उनले यस गर्मीमा सोशल मीडियामा एक फ्यानलाई भनिन्। 'मान्छे गल्ती गर्दछ, तर म घृणा मा समातेर मेरो आफ्नै चोट चोट छैन। म मेरो सुन्दर बच्चा हुर्काउन र व्यस्त छु कि [पैसा] कुनै पनि व्यक्तिलाई घृणा गर्न। '
निक्की रीडले श्रीमान् इयान सोमरल्डरलाई वार्षिकोत्सवमा राखिन्
क्याथरीन जेटा-जोन्स र माइकल डगलसको विवाहको रहस्य खुल्यो
रोबर्ट डे नीरो तलाक अदालत
स्नूकीले प्लास्टिक सर्जरी गरे
टेरेसा न्यायाधीश र जो गोर्गा
केभिन हार्ट काममा फर्कदै
क्याटलिन जेनर फेरि ब्रुस हुन चाहन्छ
क्रिस हेम्सवर्थ र ब्री लार्सन